Global Voices teny Malagasy » Valintenin-kalozana amin’ny fampirantian-javakanto mitsapa ny fetran’ny fahalalaham-pitenenana ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Aogositra 2019 5:46 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fanampenam-bava, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Sokitra “vehivavy fampiononana” koreana avy amin'ilay fampirantiana Aichi 2019 fanao isan-telotaona “Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?” nofoanana. Pikantsary: “Governoran'i Aichi mifanandrina amin'ny Ben'ny tanànan'i Nagoya amin'ny resaka fahalalaham-pitenenana.” Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube ANN ofisialy .
Iray fotsiny ihany amin'ny asa aseho ao amin'ny Aichi Triennale 2019 , izay tontosaina manomboka ny 1 aogositra ka hatramin'ny 14 oktobra 2019 ao amin'ny prefektioran'i Aichi ary manasongadina ny sanganasan'artista iraisampirenena miisa 80  ny fampirantiana nofoanana, mitondra ny lohateny hoe “After Freedom of Expression?”  [“Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?”]. Ao anatin'ny lohahevitra izay miasa ao amin'ny fandaharam-potoanan'ny fetibe efatra ao amin'ny Triennale ny miezaka hanavatsava ny herin'ny zavakanto ao anatin'izao fotoanan'ny zava-tsandoka izao, indrindra fa amin'ny vatan'ny vehivavy.
Ilay fampirantiana mampiady hevitra “Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?” ao amin'ny Triennale Aichi, raha ny marina dia tohin'ny seho teo aloha  izay nanavatsava ireo lohahevitra heverina ho fady resahana ho an'ireo andrim-panjakana ara-kolontsaina ao Japana. Iray amin'ireo lohahevitra ireo ilay lazaina ho “comfort women” [vehivavy fampiononana]  [mg] noterena ho andevozina ara-pananahana manerana an'i Azia nataon'ny governemanta japoney sy ny hery miaramila nandritra ny ady lehibe faharoa.
Ny andiany fampirantiana “Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?” tamin'ity taona ity dia nanasongadina “Tsangambaton'ny zazavavin'ny fandriampahalemana ” nataon'ny artista Koreana tatsimo izay natao ho sariohatry ny lazaina ho “vehivavy fampiononana” manodidina ny 200 000 izay nantsoina ara-pomba miaramila, naondrana ary nandevozin'ny  [mg] manampahefana japoney. Misy itovizana amin'ireo tsangambato mampiady hevitra any Korea Atsimo sy Etazonia  izay niteraka tabataba avy amin'ireo Japoney mpaneho hevitra, politisiana ary mpikatroky ny farany havanana ilay tsangambato.
“Lehilahy iray nandefa fax mandrahona voasambotra ho ahiahiana manimba raharaham-pihariana”
Nisambotra lehilahy iray (59 taona) ahiahiana ho manimba raharaham-pihariana ny polisin'i Aichi taorian'ny fax fandrahonana iray nalefa tany amin'ny mpikarakara ny Triennale Aichi tao amin'io prefektioran'i Aichi io ihany.
— Avy amin'ny servisim-baovao JiJi
Tamin'ity indray mitoraka ity, nanomboka avy hatrany ny fandrahonana rehefa naseho tamin'ny andro voalohany Triennale tamin'ny voalohany aogositra ny tsangambaton'ny “vehivavy fampiononana”. Ankilan'ny firohotry ny imailaka sy antso telefônina feno fankahalana, nisy lehilahy Japoney iray efa nanana tantara lava amin'ny fanaovan-kabarim-pankahalana Koreana , izay efa nosamborina, nandefa fax tamin'ny mpikarakara ny fetibe mandrahona handoro ny toerana  raha tsy esorina ilay tsangambato. Noho ny vao nisian'ilay fanafihana tamin'ny alalan'ny fandoroana nahazo ny studio fanaovan-tsarimiaina ao Kyoto izay nahafatesana olona 35  voatery ny mpikarakara hanakatona ny fampirantiana mandritra ny andro maromaro.
Na izany aza, mbola nahazo fanakianana betsaka momba ilay tsangambato ny mpikarakara ny Triennale ary ny hafa mahita sanganasa anti-Japoney, tahaka ny lahatsary iray ahitana ny saripikan'ny Amperora Hirohito an'i Japana tamin'ny vanimpotoanan'ny ady eo an-dalam-pahamaizana. Takian'i Kawamura Takashi, ben'ny tanàna mpandrendri-bahoaka ao Nagoya, iray amin'ny tanànan'ny prefektioran'i Aichi mampiatrano ny Triennale, ny hanaisorana ny tsangambaton'ny vehivavy fampiononana, miantso izany ho “tsy mety ara-javamisy” sy “fandaniana ny volan'ny mpandoa hetra.” 
Ampangain'i  Omura Hideaki, governoran'ny prefektioran'i Aichi, ho manao sivana i Kawamura, saingy amin'ny maha-filohan'ny komity mpikarakara ny Triennale, nanambara i Omura tamin'ny 4 aogositra fa samy ho esorina ao amin'ny programan'ny Triennale na ny tsangambato na ny fampirantiana “Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?” noho ny resaka ara-piarovana.
Samy tsy mety na amin'ny vondrom-piarahamonin'ny zavakanto ao Japana na amin'ny artista miisa 80 nasaina handray anjara tamin'ny Triennale ny fanapahan-kevitry ny komity mpikarakara hanaisotra ny tsangambato sy hanafoana ny fampirantiana. Tamin'ny 6 aogositra , nisy vondrona artista niantso ny Triennale hanaisorana ny sanganasany tsy ho ao amin'ny seho.
Araka ny ArtNews :
Tao amin'ny taratasy misokatra iray nivoaka tamin'ny 6 aogositra tao amin'ny Facebook, artista 72 amin'ny 90 mandray anjara no mikafara amin'ny fanapahan-kevitra hanakatona ny seho, milaza izany ho sivana. Herinandro taty aoriana, sivy amin'ireo artista no niantso hanesorana ny sanganasan-dry zareo ao amin'ny Triennale raha mbola mikatona ny “Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?” mba ho fanehoana ampahabemaso firaisankina amin'ireo artista voasivana.
Misy ihany koa ny fanontaniana amin'ny fomba nandraisana fanapahan-kevitra hanakatonana ny fampirantiana “Aorian'ny Fahalalaham-pitenenana?”. Nanaiky ny ankamaroan'ny fibedesana tamin'izay nitranga ny tale artistikan'ny Triennale, Tsuda Daisuke, mpanora-gazety malaza dia malaza ao Japana ary manana mpanjohy 1,6 tapitrisa ao amin'ny Twitter .
Tamin'ny antsafa notanterahana tamin'ny 6 aogositra, naneho ny alahelony noho ny nanekena hanaiky ny tsindry ivelany i Tsuda, nilaza  hoe, “Lasa nametraka ohatra ratsy tamin'ny fikikisana lanonana ara-kolontsaina noho ireo fanafihana tamin'ny alalan'ny antso an-telefonina aho […] Ekeko ny tsikera fa tokony mbola hihevitra ny ratsiratsy kokoa noho izay efa niomanako aho.”
Saingy tsy nahatapitra ny fitarainana ny fialantsinin'i Tsuda voalohany, ary tsy nampihena ny ahiahin'ny artista mandray anjara maniry ny hanaisorana ny asan-dry zareo tsy ho ao amin'ny Triennale. Tao amin'ny lahatsoratra Medium  lavalava nivoaka tamin'ny 15 aogositra, nanaiky i Tsuda fa fanapahan-kevitra samirery, tsy nijerena ary tsy nanajana izay fanirian'ny artista tafiditra, ny fanapahan-kevitra hanaisotra ny tsangambato sy ilay fampirantiana mampiady hevitra tsy ho ao amin'ny Triennale.
Rehefa nipoaka voalohany ny fifandirana tany amin'ny fanombohan'ny fampirantiana tamin'ny 2 aogositra, nitaraina i Tsuda tao amin'ny fanambaràna nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Triennale  fa ny tsindry hanaisotra ny tsangambato sy hanakatona ny fampirantiana no:
[…] hanehoana amin'ny olom-pirenena — sy amin'izao tontolo izao — fa ny rivotra ara-piarahamonina iainana eto Japana amin'izao fotoana izao no tsy mamela hisian'ny resaka momba ny toerana misy ny firenentsika, na ny endrika ratsy tamin'ny lasany. Manantena izahay fa hihevitra izany ireo andaniny nanafintohina ary hijery ny halalin'ny hetsika nataon-dry zareo.
Niady hevitra taty aoriana  i Tsuda fa tsy “anti-japoney” na ilay tsangambato na ny fampirantiana, izay misava ny fihetsik'i Japana tamin'ny fotoanan'ny ady :
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena sy fiarahamonina, ny governemanta, ny miaramila, na ny vahoaka mihitsy no nanana tantara nampalahelo na ratsy tamin'ny famoretana ny zon'olombelon'ny vahoakany na ny hafa. Na izany aza, nieritreritra ny amin'ny tantarany fantatry ny olona ny firenena sy fiarahamonina maro mba tsy hamerina izany intsony, fa mba hiaina sy hihetsika araka ny tokony izy mba ho hajain'ny vahoakany sy ny firenena hafa.
Mihevitra aho fa mety amin'ny fiarahamonintsika Japoney izany toe-javatra izany.
Mitohy mandra-pahatonga ny 14 oktobra  ny Triennale Aichi.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/23/142691/
 Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube ANN ofisialy: https://youtu.be/UflAmcRWxMg
 Aichi Triennale 2019: https://aichitriennale.jp/en/
 ny sanganasan'artista iraisampirenena miisa 80: https://www.japantimes.co.jp/culture/2019/07/30/stage/diving-world-political-performance-aichi-triennale/#.XVYxDDcvNEY
 ilay lazaina ho “comfort women” [vehivavy fampiononana]: https://mg.globalvoices.org/2016/01/07/78044/
 Tsangambaton'ny zazavavin'ny fandriampahalemana: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/08/16/national/kyoto-animation-suspends-soliciting-novels-annual-contest/#.XVZaMTcvNEY
 efa nanana tantara lava amin'ny fanaovan-kabarim-pankahalana Koreana: https://twitter.com/Anti_Discrimina/status/1159669115323203589
 handoro ny toerana: https://mainichi.jp/english/articles/20190808/p2g/00m/0na/038000c
 “tsy mety ara-javamisy” sy “fandaniana ny volan'ny mpandoa hetra.”: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201908060027.html
 Tamin'ny 6 aogositra: http://www.artnews.com/2019/08/13/aichi-triennale-2019-work-removal/
 mpanjohy 1,6 tapitrisa ao amin'ny Twitter: https://twitter.com/tsuda
 fanambaràna nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Triennale: https://aichitriennale.jp/en/news/2019/004036.html
 14 oktobra: https://aichitriennale.jp/en